धर्म संस्कृति Archives - Onlines Time
Dec42021 by onlinestimeNo Comments
यस वर्षको एक मात्र पूर्ण सूर्यग्रहण आज लाग्दैछ । अन्टार्कटिकाका केही भाग शनिबार दुईदेखि चार मिनेटसम्म पूर्ण रूपमा अँध्यारो हुनेछ। भारतीय समय अनुसार दिउँसो १ बजे अन्टार्कटिकाको रोने आइस शेल्फको किनारमा सूर्यलाई ढाकेको चन्द्रमाको दुर्लभ दृश्य देख्न सकिन्छ। अन्टार्कटिकामा अक्टोबरदेखि लामो गर्मी दिनहरू छन् र अप्रिलसम्म सूर्य अस्ताउँदैन। यस्तो अवस्थामा यो ग्रहणले अन्टार्कटिकालाई केही समयको लागि राहत दिनेछ। नवभारत टाइम्सका अनुसार वर्षको एक मात्र पूर्ण सूर्यग्रहण पृथ्वीको अधिकांश भागमा देखिने छैन। आंशिक ग्रहण अष्ट्रेलिया, चिली र न्यूजिल्याण्डका केही भागहरू सहित दक्षिणी गोलार्धमा देखिनेछ। सूर्यग्रहण लगभग हरेक छ महिनामा हुन्छ जब चन्द्रमा परिक्रमा गर्दा पृथ्वी र सूर्यको बीचमा आउँछ। अर्को पूर्ण सूर्यग्रहण अप्रिल ८, २०२४ मा हुनेछ र क्यानडा, मेक्सिको र अमेरिकाका केही भागहरूमा व्यापक रूपमा देखि...
धन प्राप्तिको लागि शुक्रबार यी उपायले माता लक्ष्मीलाई पार्नुहोस् प्रशन्न !
तन्त्र शास्त्रको मान्यता अनुसार यदि शुक्रबार माता महालक्ष्मीको पूजा गरियो भने उहाँ आफ्ना भक्तहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ र भक्तमाथि उहाँको कृपा सधैं रहिरहन्छ। ग्रन्थहरुमा यसको लागि केही उपाय पनि गरिएको छ। ती उपाय अपनाएर तपाईं पनि माता लक्ष्मीलै प्रशन्न पार्न सक्नुहुन्छ। के हुन् त ती उपाय? जान्नुहोस्.. -शुक्रबार साँझ घरको उत्तरपूर्वी भागमा गाईको घीउमा बत्ती बाल्नुहोस्। बत्तीमा केही केशर पनि राख्नुहोस् र कपासको सट्टा रातो काँचो धागो प्रयोग गर्नुहोस्। यो उपाय गर्नाले धन योग बन्छ। -शुक्रबारको दिन घरमा ७ कुमारी केटीलाई बोलाएर भोजन गराउनुहोस्। उनीहरुलाई केशर युक्त खीर भोजन गराउनुहोस् र दक्षिणा र लुगाहरू दान गर्नुहोस्। -शुक्रबार एउटा पहेंलो कपडा लिनुहोस् र त्यसमा पाँच पहेंलो कौडा, केसर र सिक्का राख्नुहोस्। यी सबै चीजहरू त्यस कपडामा बाध्नुहोस् र त्यसलाई तपाइँको पैसा राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। य...
हिन्दू शास्त्रमा जस्तै बौद्ध धर्मसम्बन्धी ग्रन्थमा पनि नारीका चरित्र र स्वभावबारे वर्णन गरिएको पाइन्छ बौद्ध ग्रन्थमा श्रीमतीका प्रकारलाई विभिन्न सात वर्गमा विभाजन गरिए को पाइन्छ। भगवान गौतम बुद्ध आफैले सात किसिमका श्रीमतीहरूको बारेमा बयान गरेका हुन्। कुरा गौतम बुद्धले धर्म प्रचार गरिरहेको बेलाको हो। त्यस कालमा अनाथपि ण्डिक नामका एक व्यक्ति थिए । उनी आफै, उनका छोरा र दुई छोरी साह्रै धर्मात्मा थिए। उनले आफ्ना छोराको बिहे सुजाता नामकी एक युवती सँग गरिदिएका थिए । सुजाताको स्वभाव भने विपरीत। एक पटक भगवान अनाथ पिण्डिकको घरमा जाँदा कोलाहल मच्चिरहेको रहेछ। कारण सोध्दा अनाथपिण्डिकले भगवा न लाई सबै बताइदिए । त्यसपछि भगवानले सुजातालाई बोलाई सात प्रकारका श्रीमती बारे उपदेश दिएका थिए । यी हुन सात प्रकारका श्रीमतीः १) आयासम (स्वामिनी) श्रीमतीः केही काम नगर्ने, अल्छी, धेरै खाने, कठोर वचन बोल्...